US က Xiaomi ကို Ban လိုက်ခြင်းက ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်လဲ? — Anycall Mobile
By Naw Htoo Aung January 15, 20212Mins Read
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ဆီကို သတင်းတစ်ပုဒ် တက်လာတယ်ဗျ။ အခု Video တက်တဲ့အချိန်ဆို အဲ့သတင်းက တော်တော်လေးလည်း ပြန့်နေလောက်ပြီ။ ဘာသတင်းလဲဆိုတော့ “Xiaomi နဲ့ တခြား ကုမ္ပဏီ (8) ခုကို US က Ban လိုက်တယ်” ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Xiaomi ဖုန်းသုံးတဲ့သူတွေများလို့ လူတွေတော်တော်များများ အထိတ်တလန့်ဖြစ်မသွားအောင် ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားကြားချင်းပဲ Video အမြန်ရိုက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုတော့ Xiaomi ကို US က Ban လိုက်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား ? ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ် Ban လိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ထင်သလို “Huawei ကို Ban ထားသလိုမျိုး US ရဲ့နည်းပညာတွေသုံးခွင့်မပေးတော့တာ၊ US မှာတင်ရောင်းခွင့်မပေးတော့တာမျိုးတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါဆို ဘယ်လိုလဲ ? အရင်ဆုံး သတင်းအပြည့်အစုံကို အရင်ဆုံး နည်းနည်းလောက်ပြောပြပါ့မယ်။
တကယ်တမ်း သတင်းအပြည့်အစုံက “US အစိုးရကနေပြီး American တွေကို Xiaomi နှင့် တခြား ကုမ္ပဏီ (8) ခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ကို ပိတ်ပင်လိုက်တာပါ။” အဓိကကတော့ အဲ့ဒီ Xiaomi အပြင် နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ (8) ခုဟာ တရုတ်စစ်တပ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲပြီး အခုလိုပိတ်ပင်လိုက်တာပါ။ အဲ့ဒီလို ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အမိန့်အရ Xiaomi မှာ invest လုပ်ထားတဲ့ American နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ဆက်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အရင်က Trump ရဲ့ Executive Order (ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သောအမိန့်) အရ အဲ့လို Blacklist ထဲမှာထည့်ခံထားရတဲ့ Companies တွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသမျှကို 2021 November လ 11 ရက်နေ့မတိုင်ခင် ပြန်ထုတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က အဲ့ဒီသတင်းကို စစ ထုတ်လိုက်ချင်းမှာပဲ Xiaomi ရဲ့ Share တွေ 10% အထိ ထိုးကျသွားပါပြီ။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ တတိယအကြီးဆုံးဖုန်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Xiaomi အတွက်တော့ ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုပါပဲ။ ဆိုတော့ ဒီလို Ban လိုက်လို့ Xiaomi က ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ ?
သေချာတာကတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ နစ်နာသွားမှာပါ။ အခုက သူတို့ရဲ့ American နိုင်ငံသားတွေကို Xiaomi မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်မပေးတော့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုး ဒီ Ban တာက Huawei လိုမျိုး Google Services တွေသုံးမရတော့တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ Xiaomi ဖုန်းတွေကို US မှာရောင်းလို့မရတော့တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အင်း မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောရင် ပိုပြီးသင့်တော်မယ်ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောက်ထပ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကို မခန့်မှန်းနိုင်သေးတာမို့လို့ပါ။ နောက်ထပ် 20 ရက်နေ့ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင် Joe Biden က အာဏာရတော့မယ်။ အဲ့အချိန်မှာ ဒီအမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးမလား ? ဒါမှမဟုတ်ဘဲ ဆက်တိုးပြီး Ban ပစ်လိုက်မလားဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။
အိုကေ ဆိုတော့ ဒီ Ban လိုက်တဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲ ? ကျွန်တော်ကတော့ ရှင်းရှင်းပဲ။ Trump ကထွက်ခတ်ခတ်တာလို့ပဲ မြင်တယ်။ သူထွက်ခါနီး လက်ကျန်အာဏာလေးနဲ့ ပြဿနာတွေလျှောက်လုပ်နေတယ်ပေါ့။ တကယ်တမ်း သူတို့စွပ်စွဲသလိုသာ မှန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုတိုင်းပဲ Ban ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ပြဿနာမရှိနိုင်သေးဘူးလို့မြင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Google Services တွေ ဆက်ရနေဦးမှာမို့လို့ပါ။ Google Services တွေရနေသေးသ၍ ကျွန်တော်တို့က အဆင်ပြေပါသေးတယ်။
တကယ်လို့သာ Joe Biden လက်ထက်မှာ ထပ်တိုးပြီး Huawei လို Ban လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စက နည်းနည်း ပိုကြီးသွားမယ်။ Xiaomi နဲ့ Huawei နဲ့ပေါင်းသွားပြီး Smartphone လောကအတွက်ကြီးမားတဲ့ ရိုက်ချက်တွေလာတော့မယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် တရုတ်က သူတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးစုပြီး ကိုယ်ပိုင် Operating System တွေ၊ ကိုယ်ပိုင် SoC တွေနဲ့ Smartphone ဈေးကွက်ကို ဗြောင်းဆန်အောင်လုပ်မလား ? ဒါကတော့ နောက်ထပ် နောက်ထပ် ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်လို့ စောင့်ကြည့်ကြပါဦးလို့။ အခုအတိုင်းကတော့ စိတ်မပူကြပါနဲ့။ Google Services တွေရနေဦးပါဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာတော့ မရှိနိုင်သေးပါဘူးလို့ ပြောရင်းနဲ့ပဲ။ အဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဒီသတင်းကြားပြီး အစိုးရိမ်လွန်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီ Post လေးကို Share ပေးပြီး သိပ်စိတ်မပူဖို့ ပြောပေးလိုက်ကြပါဦး။ နောက်ထပ် Article တစ်ခုမှာ ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။